Fanontaniana sy hevitra momba ny fisainana
Ny hany hafatra tiako dia ny "Misaotra anao". Io boky io dia nisy fiantraikany teo amin'ny làlako, nanokatra ny foko ary nampientanentana ahy ny fotony! Miaiky aho fa ny fahasarotan'ny sasany amin'ireo fanamby ara-materialy amiko sy ny mbola tsy azoko an-tsaina tanteraka ny sasany, raha tsy ny ankamaroany, ny fitaovana. Saingy, ampahany amin'ny antony mampientanentana ahy izany! Ny famakian-teny tsirairay dia mahazo fahalalana bebe kokoa. I Harold dia namako tao am-poko, na dia tsy sambatra aza aho dia nihaona taminy. Misaotra ny fototry ny fametrahana ilay fitaovana maimaim-poana ho an'ireo izay mila izany aho. Feno fankasitrahana aho!
Azo antoka Fisainana sy faniriana dia fanambarana miavaka ho an'ny androntsika.
Ny sakany sy ny halalin'ny Fisainana sy faniriana malalaka, kanefa ny fiteniny dia mazava, marina ary mampihetsi-po. Tany am-boalohany tanteraka ilay boky, midika izany fa avy amin'ny fisainan'i Percival manokana izy io, ary noho izany dia lamba iray manontolo, tsy miova. Tsy miady saina izy, tsy maminavina na maminavina. Tsy manao fanamarihana momba ny parenthetical izy. Toa tsy misy teny diso toerana, tsy misy teny diso fampiasa na tsy misy dikany. Ny olona iray dia hahita fampitoviana sy fanitarana fitsipika sy fotokevitra maro hafa izay voarakitra ao amin'ny Western Wisdom Teachings. Ny iray koa dia mahita zavatra vaovao, eny fa na dia ny tantara ary hotanterahin'izany. Na izany aza, mety ho malina ny tsy maika ny hitsara nefa mamehy tena satria tsy dia mieritreritra ny hiaro tena amin'ny tsy fahalalan'ny mpamaky amin'ny lohahevitra i Percival satria mamela ny lojika amin'ny famelabelarany hitarika ny fotoana sy ny filaharan'ny famoahana azy. Ny fiangavian'i Heindel ao amin'ny "Word to the Wise" dia mety ihany koa rehefa mamaky Percival: "entanina ny mpamaky mba tsy hitana ny teny rehetra amin'ny fiderana na fanomezan-tsiny mandra-pahafatin'ny fandalinana ny asa azy amin'ny fahamendrehana na fahamendrehany."
Ity dia iray amin'ireo boky manan-danja indrindra nosoratana tamin'ny tantara fantatra sy tsy fantatra amin'ity planeta ity. Ireo hevitra sy fahalalana voalaza dia manintona ny fisainana, ary manana ny "peratra" fahamarinana. HW Percival dia mpahazo fanampiana saika tsy fantatra amin'ny zanak'olombelona, ​​araka ny hasehon'ny fanomezam-pahasoavany, rehefa nohadihadiana tsy mitanila. Talanjona aho noho ny tsy fisian'ny sangan'asany amin'ireo lisitra "famakiana atolotra" marobe any amin'ny faran'ny boky lehibe sy manan-danja novakiako. Izy tokoa no tsiambaratelo nafenina tsara indrindra amin'ny tontolon'ny lehilahy misaina. Tsiky mahafinaritra sy fahatsapana fankasitrahana no mipoitra ao anaty, isaky ny mieritreritra an'io olona voatahy io aho, fantatra amin'ny tontolon'ny lehilahy hoe Harold Waldwin Percival.
Tsy tena azoko mihitsy, mandra-pamiko Fisainana sy faniriana, ahoana ny fomba fisainantsika amin'ny fomba fisainantsika ara-bakiteny amin'ny alalan'ny fisainantsika.
Fisainana sy faniriana Tonga OK Ny vola dia tsy afaka nividy izany. Nitady izany nandritra ny androm-piainako aho.
Tsy tamin'ny voalohany no nanombohako ny fianarana Fisainana sy faniriana dia nanamarika ny fivoarana marina aho teo amin'ny fiainako.
Fisainana sy faniriana nataon'i HW Percival dia iray amin'ireo boky mahatalanjona indrindra nosoratana. Miresaka momba ilay fanontaniana taloha, Quo Vadis? Avy aiza isika? Fa maninona no eto isika? Ho aiza isika? Izy dia manazava ny fomba hahatongavan'ny eritreritsika ho anjarantsika, toy ny fihetsika, zavatra ary zava-mitranga amin'ny fiainantsika tsirairay. Isika tsirairay avy dia tompon'andraikitra amin'ireo eritreritra ireo, sy ny vokany eo amintsika sy amin'ny hafa. Mampiseho amintsika i Percival fa izay miseho ho "korontana" amin'ny fiainantsika andavanandro dia misy tanjona sy filaminana izay azo jerena raha hanomboka hifantoka amin'ny fisainantsika isika ary hanomboka ny fisainana tena izy, araka ny voasoritra ao amin'ny sangan'asany. Percival tenany dia nanaiky fa sady tsy mpitory no tsy mpampianatra, fa manome antsika cosmolojia mifototra amin'ny Faharanitan-tsaina. Universe milamina sy tanjona. Tsy mbola nisy boky metafizika nanolotra fampahalalana mazava sy fohy, misy ao amin'ity boky ity. Tena nahazo aingam-panahy sy aingam-panahy!
Fisainana sy faniriana dia mahafinaritra ahy fotsiny. Nataon-dry zareo ahy tontolo feno tsara ary azo antoka fa ny valin'ity vanim-potoana iainantsika ity.
Raha ny mahazatra dia heveriko fa ny Fahalalana lalina ny Fahalalana - ary ny vaovao mazava sy mazava ao anaty Fisainana sy faniriana Ny HW Percival dia mihoatra noho ny vidiny. Izany dia manandratra lavitra ireo mpanoratra mpanoratra amin'ny fivavahana eran-tany, izay, raha ampitahaina amin'ny Percival, dia toa manjombona, tsy maharesy lahatra ary manakorontana. Ny tombatombako dia miorina amin'ny fikarohana 50 taona. Ny Platon ihany (rain'ny filozofia tandrefana) sy Buddhism Zen (mifanohitra amin'izay) dia tonga manakaiky an'i Percival, izay mampifandray amin'ny fomba mazava sy feno!
Ny percival dia 'nanarona ny voaly', ary ny bokiny dia nanokatra ny tsiambaratelon'izao tontolo izao tamiko. Vonona ho an'ny jirom-boninahitra iray aho na ny boneyard rehefa nomeko ity boky ity.
Fisainana sy faniriana dia fitsapana tena tsara amin'ny karazana metafisika samihafa ary misy rakipahalalana momba izany. Azoko antoka fa hanohy hiteny izany amin'ny lahateniko sy ny asako aho.
Efa nandalina fitsipika maro aho nandritra ny taona maro ary nanana izany izy ary nahafantatra ny fomba hampifangaroana izany rehetra izany ary hamoaka tebiteby manan-karena amin'ny fiainana ary iza isika / tsy misy.
Na dia eo aza ny famakiana mavitrika ao amin'ny Theosophy sy amin'ny ambaran'ny ambaratonga ara-bakiteny dia mbola tsapako izany Fisainana sy faniriana no boky mahagaga indrindra indrindra sy mahatalanjona indrindra ary mahatsikaiky indrindra amin'ny karazany. Io ilay volavola tokana hiarahako miaraka amiko, raha toa aho noho ny antony iray nandroaka ny boky hafa rehetra.
novakiako Fisainana sy faniriana indroa izao ary tsy mino mihitsy fa tena misy tokoa ny boky toy izany.
Nandritra ny taom-polo taona maro lasa izay, dia efa nianatra zavatra maro momba ny toetran'ny olona amin'ny fomba saro-takarina sy ny eritreretina malalaka indrindra aho. Vitsy dia vitsy tamin'ireo sekoly sy asa izay nianarako no nanana zavatra sarobidy mba hanolorana ny tena maha-izy ny olombelona sy ny anjarany. Ary avy eo ny andro iray tsara dia nidradradradra aho Fisainana sy faniriana.
Amin'ny maha-psycho-physiotherapeist avy amin'ny asa dia nampiasa ny asan'ny Mr. Percival aho mba hanohy ny fahasitranana sy ny fahatakaran'ireo olona misafotofoto maro-ary izany dia miasa!
Samy mamaky ampahany amin'ny bokiny isan'andro izaho sy ny vadiko, ary hitanay fa na inona na inona mitranga, na ao anatiny na ivelany, dia azo hazavaina amin'ny alalan'ny fomba fijeriny ny fahamarinana. Nanisy filaminana tamim-pahamendrehana toa ahy izy, ka mitazam-potsiny manodidina ahy isan'andro. Ny fototra nihorohoroana dia niorina tamim-pahanginana tsy misy fisavoritahana. Mino aho Fisainana sy faniriana dia angamba ny boky mahatalanjona indrindra hatramin'izay.
Ny boky tsara indrindra novakiako hatramin'izay; tena lalina ary manazava ny zava-drehetra momba ny fisian'ny tena. Nilaza i Bouddha hatry ny ela fa ny eritreritra no renin'ny hetsika rehetra. Tsy misy tsara kokoa noho ity boky ity raha hazavaina amin'ny antsipiriany. Misaotra anao.
Isika rehetra dia nandre ireo teny roa ireo imbetsaka hoe: "Amin'ny fahazoana ny mahazo anao, mahazo fahazoana fahalalana" ary "mahafantatra ny tenanao." Tsy fantatro akory fa tsy misy fiandoham-potoana tsara kokoa hahazoana io fiafarana io fa amin'ny alalan'ny asan'i Harold W. Percival